Shan (Tai) Dictionary
Ethnic Group site
ဒေါကျတာသနျးထှနျးရဲ့စာတမျးနဲ့ဆောငျးပါးမြား စာရငျး(အင်ျဂလိပျ-မွနျမာ) - ခငျမောငျကွီး
သူငယျတျောနှငျ့သူငယျတျောသနေတျ - ဒျေါကွနျ
​ပစောမြား ထိနျးသိမျးပွုပွငျခွငျး - ဦးညှနျ့မောငျ(စာကွညျ့တိုကျမှူး-ငွိမျး)
ပွက်ခဒိနျအစီအရငျ နှငျ့ နညျးစနဈ - သနျးနီ
မငျးကွီးမကျြနှာရှညျ - ဆနျးထှနျး(မနျးတက်ကသိုလျ)
1. ကငျ့ဘဲလျ နှငျ့ ကငျ့ဘဲလျလမျး - မွငျ့ဆှေ
(Article in Burmese)
... - ဖေဖေကျော် အလောင်းဘုရားနှင့်ရန်ကုန်မြို့တော် - ငွေလင်း ရန်ကုန်ဗဟိုထောင်ကြီး - မြင့်ဆွေ ရန်ကုန်မြို့ လမ်းအမည်များ - လှသမိန် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသမိုင်း - မြင့်ဆွေ မနက်ခင်း၌ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ...
Created on 12 June 2016
2. မင်ျဂလာဗွောသံ - သုတသေီမွငျ့ထှနျး
... စာပေဆောင်းပါးများ အင်းဝခေတ်ရုပ်သေး နှင့် တူရိယာပညာသည်များ - မြကေတု လင်းကွင်းတူရိယာ - လှသမိန် ဗုံ-ပတ်-ကြေးနောင် အသံဆောင် - ဟံသာဝတီဦးဘရင် ကြေးသံဆယ်မျိုး - ဦးသော်ဇင် ဂီတနှင့်အက - ဒေါ်စောမြဧကြည် ...
3. ရှေးဦးအဘိဓာနျတဈစောငျ - မမွေို့မိုးကွညျ
... အဘိဓာန် - မြဟန် မြန်မာစကားပုံ အဘိဓာန် - လှသမိန် ...
4. ရှမျးရိုးရာ စကားပုံမြား - စိနျထှနျး(ပခုက်ကူ)
(Article in Shan)
... သိဿကောဝါဒ စကားပုံနှင့်သြ၀ါဒ ကထာများ ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီး၏ သိဿကောဝါဒ စကားပုံနှင့် သြ၀ါဒကထာများ တံငါလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စကားပုံများ - ဦးမြင့်မောင် မြန်မာစကားပုံ အဘိဓာန် - လှသမိန် ...
5. မွပေဒသောကြှနျး သမိုငျးအစ - ခရမျးကြျောနိုငျဦး
6. မွို့တျောရနျကုနျ သိမျကွီးစြေး - လငျးယုနျသဈလှငျ
7. မွနျမာစကားအသုံးအနှုနျး - လှသမိနျ
eBook file size: 81.5 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၇၆ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ၊ အတှဲ ၂၄၊ အမှတျ ၃ ထုတျ ​မွဝတီမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download Related Articles လှသမိန်၏စာအုပ် ...
8. ရနျကုနျဆေးရုံကွီးသမိုငျး - မွငျ့ဆှေ
... ရန်ကုန်လမ်း ရာဇ၀င် - ဖေဖေကျော် မန္တလေးရတနာပုံ နှင့် ရန်ကုန်ရတနာပုံ - ဇေယျ ရန်ကုန်မြို့ လမ်းအမည်များ - လှသမိန် အလောင်းဘုရားနှင့်ရန်ကုန်မြို့တော် - ငွေလင်း မနက်ခင်း၌ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဈေးများကို ...
9. ရန်ကုန်မြို့ လမ်းအမည်များ - လှသမိန်
eBook file size: 96.1 KB ebook pages: 8 Publication: ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ဖေဇေါ်ဝါရီလ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂)ထုတ် ပန်ရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
10. မြန်မာ့စကား ရင်းမြစ်များ - လှသမိန်
eBook file size: 93.5 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ အမှတ်(၁၆၁)ထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
11. မြန်မာ့အကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာရေးစာအုပ်များ - လှသမိန်
eBook file size: 90.3 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ အမှတ်စဉ်(၆၅)ထုတ် စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
12. လင်းကွင်းတူရိယာ - လှသမိန်
eBook file size: 879 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
13. နောက်တိုး ပေါရာဏများ - လှသမိန်
eBook file size: 198 KB ebook pages:7Publication: ၁၉၈၅-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ စာပေလုပ်သားမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသောဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
Created on 14 May 2014
14. တိမ်မြှုပ်နေသော မြ၀တီဝန်ကြီး၏ ပြဇာတ် - လှသမိန်
eBook file size: 38.3 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလထုတ် ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
15. မြန်မာ့တွဲလုံး စကားလုံးများ - လှသမိန်
eBook file size: 49.9 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ မေလထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
16. ပါဌ်ဆင့်ပါတိုင်း ပါဠိမဟုတ် - လှသမိန်
eBook file size: 81.3 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
17. မြန်မာ့မြို့ရွာ အမည်များ - လှသမိန်
eBook file size: 37.8 KB ebook pages: 8 Publication: ၁၉၇၀-ခုနှစ်၊ မေလထုတ်၊ စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း၌လာသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
18. မြန်မာစကားပုံ အဘိဓာန် - လှသမိန်
eBook file size: 589 KB ebook pages: 97 ပုံနှိပ်ခြင်း - ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ပညာနန္ဒပုံနှိပ်တိုက်၊ အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ၊ ရန်ကုန်မြို့။ download -Related Articles- လှသမိန်၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
Designed & Hosted By: IT